Umbungu - Detroit
Unquphantsi sinombuki zindwendwe onguStephen & Christina
ICaterpillar yindawo ekhethekileyo yangoku kunye neyobuchule yokuhlala ebekwe kwindawo yaseCore City eDetroit. Le ndawo yokuhlala yodwa ibekwe embindini kufutshane nayo yonke into esibonelela ngayo isixeko. Indawo iyilwe ngokujikeleze ifanitshala kunye nezinto ezifunyenwe zijikeleze isixeko, ukwenza indawo yangoku yokubuyela kuzo zombini iindwendwe ezikufutshane nakude.
Ifakwe kwi-Dwell Magazine. Landela ku-Instagram @staycaterpillar
Indawo yadalwa ukuba ibe ngumthombo wohlaziyo kunye nenkuthazo - kusetyenziswa imathiriyeli yendalo kunye nezinto zakudala ezifunyenweyo ukuze kuphumle, kushukume ngoku.
Kukho igumbi elinye elinomandlalo wekumkanikazi. Ibhedi itofotofo kakhulu inomatrasi othambileyo, amashiti omqhaphu okhrimkileyo, isithuthuzeli esimfumamfuma kunye nemiqamelo ethambileyo. Kukho isibane sokufunda kunye neencwadi zetafile yekofu ukuze uhambe :)
Ikhitshi inesitovu sombane esitsha, i-Bosch dishwasher, kunye nefriji ye-whirlpool, kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngompheki engqondweni. Kukho malunga nesixhobo ngasinye sasekhitshini sesidlo esimangalisayo-kubandakanya isethi yeembiza ezisi-7, izinto ezininzi zokupheka, iiseti, nokunye. Kukho iiseti zezitya, napkins, iiglasi, kunye nesilivere. Kukwakho neencwadi zokupheka ukuze ukhuthazeke.
Ikhitshi ikwabandakanya umshicileli waseFransi, intsimbi engatyiwa, iimagi ezintle, kunye neti kunye nekofu ukuze uqalise intsasa yakho.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngazo zonke izinto eziyimfuneko kunye nezinye ezongezelelweyo. Iitawuli, iishampu, kunye nokuhlamba umzimba qinisekisa ukuba uhlala ucocekile. Kukho isepha yesandla ye-Aesop, iitawuli zokuthambisa, kunye nokunye ukuze uqiniseke ukuba ujongeka ngcono.
Hlala emva kwaye uphumle ngelixa umamele i-motown kwi-vinyl kwaye ufunda incwadi elungileyo. Ukukhanya kwemini kubetha iisilingi ezingama-24 ngokwahlukileyo kwaye kuyenza ibe yindawo engafaniyo nayo nayiphi na enye.
I-Core city yindawo yobuchule ebekwe kwintshona yesixeko. Zininzi iindawo ezintle kumgama wokuhamba ukusuka kwindawo.
Ibhlokhi nje ezantsi esitratweni, unembasa yeOcher Bakery, ethengisa iipastries ezintsha, iisandwich, kunye nemarike efunyanwa imini yonke. Kukwakho indawo yokutyela entsha ebizwa ngokuba yiBarda, leyo yindawo yokutyela yaseArgentina abapheki emlilweni.
Xa uhamba-hamba, uya kubona istudiyo seyoga, ifama yeentyatyambo zasendle, kunye nefama yasezidolophini enemveliso entsha ehlotyeni, kunye ne-pop-ups eyenzekayo rhoqo eCore City Park. Kwaye ukuba ujonge izinto ezininzi d
Umbuki zindwendwe ngu- Stephen & Christina
We're designers who have fallen in love with creating spaces for others to reflect, reset, and create. We have traveled around the world and call Detroit home. We love the creative energy, rich history, and the beautiful people we get to call our neighbors.
We're designers who have fallen in love with creating spaces for others to reflect, reset, and create. We have traveled around the world and call Detroit home. We love the creative…
Siza kufumaneka ngokupheleleyo ukuba uqhagamshelane ngexesha lokuhlala kwakho. Nokuba kukho into engahambi kakuhle okanye ufuna ukwazi indawo entle yokutya, sizindlebe zonke.
UStephen & Christina yi-Superhost